I-Biography yeJack Kilby, Inventor ye-Microchip
Imbali kunye neNkcubeko Iikhomputha neInternet
Injini yombane uJack Kilby yaqulunqa isekethe edibeneyo, eyaziwa ngokuba yi- microchip . I-microchip iyisethi yezinto ezinxibelelwano zekhompyutheni ezinjenge-transistors kunye nezichasayo ezibekwe okanye zifakwe kwi-chip encane yezinto ezixutywayo, njenge-silicon okanye i-germanium. I-microchip yahlutha ubungakanani kunye neendleko zokwenza i-elektroniki kwaye yachaphazela ukuyila kwexesha elizayo kuzo zonke iikhomputha kunye nezinye i-electronics.
Umboniso wokuqala wokuphumelela we-microchip wawukho ngoSeptemba 12, 1958.
Ubomi bukaJack Kilby
UJack Kilby wazalwa ngoNovemba 8 1923 eJefferson City, eMissouri. UKlby wakhuliswa kwi-Great Bend, eKansas.
Ufumene i-BS degree kwisixhobo sobunjineli bombane ukusuka kwiYunivesithi yase-Illinois kunye ne-MS degree kwi-engineering engineering evela kwiYunivesithi yaseWisconsin.
Ngomnyaka we-1947, waqala ukusebenza kwi-Globe Union yaseMilwaukee, apho wakha iiskrini ze-ceramic-screen for devices. Ngo-1958, uJack Kilby waqala ukusebenza kwiTexas Instruments yaseDallas, apho waqulunqa i-microchip.
UKilby wabulawa ngoJuni 20, 2005 eDallas, eTexas.
I-Jack Kilby ye-Honors kunye neMisebenzi
Ukususela ngo-1978 ukuya ku-1984, uJack Kilby wayengumNjingalwazi oPhezulu woMbane woMbane wase-Texas A & M. Ngo-1970, iKilby yamkela iMedal of Science. Ngowe-1982, uJack Kilby wanyulwa kwiHolo loLwazi lweSizwe.
I-Foundation's Kilby Award Foundation, eyayihlonipha abantu ngokuphumelelayo kwiimpumelelo zenzululwazi, iteknoloji kunye nemfundo, yasungulwa nguJack Kilby. Okubaluleke kakhulu, uJack Kilby wanikezelwa ngo-2000 weNobel Prize for Physics emsebenzini wakhe kwisiphaluka esinyeneyo.
Ezinye iiMveliso zeJack Kilby
UJack Kilby unikezelwe amalungelo angaphezu kwemashumi anesithandathu.
Ukusebenzisa i-microchip, i-Jack Kilby yenzelwe kwaye yaqulunqa i- calculator -size calculator ebizwa ngokuba yi "Pocketronic". Kwakhona waqulunqa umshicileli oshisayo owawusetyenziswe kwii-terminals data. Iminyaka emininzi uKilby wayebandakanyeka ekuvelweni kwezixhobo ezixhasiweyo zelanga.
ULwimi lweLwimi lweFranran
Imbali yekhompyutha ye-ENIAC
Ngubani owavula i-Twitter?
I-Biography: Steve Jobs
Izinto eziBaluleke kakhulu kwiiNkulungwane zama-21
I-Biography yeBill Gates
Imbali ye-Sony PlayStation
Ukubaluleka kwesiXeko saseJerusalem e-Islam
Izitentshi zeNgqungquthela zaseJamani ezingabonakaliyo
Indlela yokwenza i-Monotype Print
Kutheni sifanele si khusele ii Shark?
I-10 Eninzi Iimpapa ZamaPhrothethi Ezibizwa ngokuba nguMichael
'KwaMice neBantu' ngoJean Steinbeck Review
Indlela yokuSazisi kunye nokuLawula iiNyosi eziMhlaba
Ziphi iiMerika zaseBalkan?
Ukuguqula amaRadi kunye namaDriki
Funda isiSwahili saseSweden Isigama
I-Wudu okanye i-Ablutions yomthandazo wamaSilamsi
Uvavanyo lweDrive: 2009 Ford Bullitt Mustang
Imbali ye-Hummel ekhethiweyo ne-Goebel Figurines
Ukudumisa ngokuphumelelayo kwiKlasi